motherandchild – Page2– My Doctor
By tayzar|2020-01-20T07:15:11+00:00August 23rd, 2019|Categories: All Articles, ကလေး ကျန်းမာရေး, မိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေ|
ဒိုင်ပါလောင်ရသည့် အကြောင်းရင်းများ ဒီခေတ်မှာတော့ သေးခံဒိုင်ပါနဲ့ ကင်းတဲ့ ကလေးဆိုတာ ခပ်ရှားရှား။ ဒိုင်ပါကြောင့် မိဘတွေအတွက် လျှော်ရဖွတ်ရ
Facts of bad skincare
By tayzar|2020-01-20T08:28:51+00:00August 16th, 2019|Categories: All Articles, မိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေ, အလှအပ, အလှအပနှင့်နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ|
Skincare အရွေးမှားလျှင် ကြုံရသောပြဿနာများ အပြိုင်အဆိုင်တွေ လှပနေတဲ့ခုလိုခေတ်ကြီးထဲမှာ တံဆိပ်ပေါင်းများစွာ၊အမျိုးအမည်ပေါင်းများစွာနဲ့ အရေပြားထိန်းသိမ်းရေးပစ္စည်းပေါင်းများစွာဈေးကွက်ထဲမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ လှချင်လို့မို့ skin care
By tayzar|2020-03-30T06:52:30+00:00August 16th, 2019|Categories: All Articles, ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်မိခင် ကျန်းမာရေး, မိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေ, အလှအပ, အလှအပနှင့်နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ|
မီးတွင်းထဲ မိတ်ကပ်လိမ်းလို့ရမရ ဒီတစ်ခေါက်ပြောရမှာတော့ နည်းနည်းဆန်းတယ်။ ခေါင်းစဉ်က မီးတွင်းထဲ(မီးနေသည်)မိတ်ကပ်လိမ်းလို့ ရ/မရ တဲ့။ မိတ်ကပ်လိမ်းလို့ရမရ အရင်မပြောခင်မှာ
By tayzar|2020-01-20T07:16:56+00:00July 3rd, 2019|Categories: All Articles, ကလေး ကျန်းမာရေး, မိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေ|
ဆီးခံဝမ်းခံလောင်ကွက် မဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ မေမေဖေဖေတို့ကြုံတွေ့နေကျဖြစ်တဲ့ သားသားမီးမီးလေးတွေမှာဖြစ်သော ဆီးဝမ်းခံ(Diaper)ကြောင့်ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ အရေပြားလောင်ခြင်းကို မည်သို့မည်ပုံကာကွယ်ကြမလဲဆိုတာလေးကိုပြောကြရအောင်။ ကာကွယ်နည်းမပြောခင်မှာ Diaper rash
By tayzar|2020-01-20T05:26:05+00:00July 2nd, 2019|Categories: All Articles, ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်မိခင် ကျန်းမာရေး, မိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေ|
အမျိုးသမီးများနှင့်သံဓါတ် 'သံဓါတ်' လူတိုင်းနဲ့ရင်းနှီးပြီးသား စကားလုံးလေး။ ဒီနေ့ကတော့ အဲ့သံဓါတ်ဆိုတာရဲ့ အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေး ပြန်နွှေးပေးချင်တာ။ ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ အမျိုးသမီးတွေအတွက်အဓိကထားပြောချင်တာပေါ့။
By tayzar|2020-01-20T07:17:51+00:00June 29th, 2019|Categories: All Articles, ကလေး ကျန်းမာရေး, မိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေ|
မေမေတို့ရေ အရင်အပတ်က ကလေးများအတွက် ဆိတ်နို့ကုရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေကို ပြောပြပေးထားပါတယ်။ ကလေးတွေအတွက် ဘာကြောင့် သင့်တော်တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကို ပြောပြပေးထားတယ်နော်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူပေါင်း ထောင်ကျော်ကူးစက်နေပြီဖြစ်တဲ့ မပေါ့ဆသင့်သော ကပ်ရောဂါ….
Covid-19 ရောဂါပိုးရဲ့ ရှင်သန်မှုသက်တမ်းနှင့် Quarantine ရဲ့အရေးပါပုံတစ်ချို့….
ဖျားနာ ကိုက်ခဲ တွေနဲ့ ကြုံ လာရင် ဘာတွေ လုပ်ရမလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဥာဏ်စမ်း လေး တွေ အမေးအဖြေ လုပ်ကြည် ကြရအောင်။